Nicole 'Snooki' Polizzi kwụsịrị ịṅụ mmanya mgbe mmiri ara ehi na-atụ ụjọ: Gịnị kpatara inye ara na mmanya na-aba n'anya adịghị agwakọta - Ụwa 2022
Nicole 'Snooki' Polizzi kwụsịrị ịṅụ mmanya mgbe mmiri ara ehi na-atụ ụjọ: Gịnị kpatara inye ara na mmanya na-aba n'anya adịghị agwakọta
Nicole Polizzi, nke a maara nke ọma dị ka "Snooki" sitere na MTV's Jersey Shore, na-ekwu na ọ kwụsịrị ịṅụ mmanya mgbe abalị na-aṅụ mmanya na-agwụ na mmiri ara ara ya na-esi ísì mmanya. Na ya na-abịa memoir isiokwu ya bụ Baby Bumps: Site Party Girl to Proud Mama, na All the Messy Milestones Along the Way, Polizzi kwetara na ọ ghọtara mgbe mmanya ahụ kwụsịrị na ụbọchị oriri ya ga-ahapụrịrị ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ. nne nye nwa ya nwoke, Lorenzo. "Enwere m ike ịnụ isi bọmbụ na karama," ka o ji ejiji Snooki na-ede, dị ka NY Daily News si kwuo. “mmiri ara ehi m jupụtara na mmanya na-aba n’anya, apụrụ m iji ya malite ọkụ n’ogige. Enwere m ike iji ya sachaa ụlọ mposi.”
Dị ka ụlọ ọgwụ Mayo si kwuo, ọ dịghị mgbe ọ dị mma inye nwa ara mgbe ị ṅụrụ mmanya na-aba n'anya, nke ahụ bụkwa n'ihi na ọ dịghị ọkwa mmanya na-aba n'anya na mmiri ara ara nke a na-ewere na ọ dị mma maka ịṅụ nwa. "Mgbe ị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, ọ na-abanye n'ime mmiri ara ara gị n'ogo dị ka nke a na-ahụ n'ọbara gị. Ọ bụ ezie na nwa ara na-enye nwa ara na-enwe nanị ntakịrị ntakịrị mmanya nne ya na-aṅụ, nwa amụrụ ọhụrụ na-ewepụ mmanya na-aba n'anya n'ahụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị ọkara nke onye toro eto," ka onye ndụmọdụ Mayo Clinic, Elizabeth LaFleur dere. Ụmụaka ndị na-aṅụ mmanya na-aba n'anya site na mmiri ara ara nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu maka mmepe moto na-adịghị mma na mgbanwe n'ụdị ụra.
A na-agba ndị nne na-enye nwa ara ume ka ha zere inye ụmụ ha nri ruo mgbe mmanya na-apụ n'anya kpamkpam. Ọzọkwa, maka ndị nne na-ezube ime onwe ha, LaFleur na-atụ aro ịṅụ ihe ọṅụṅụ mgbe ha risịrị nri ka mmanya wee malite ịhapụ usoro ha n'oge etiti oge n'etiti oge nri. LaFleur dere, sị: "Ọ bụrụ na ị họrọ ịṅụ mmanya, mee atụmatụ nke ọma ka ị ghara ime ka nwa gị ṅụọ mmanya na-aba n'anya.
Banyere Polizzi, ọ dị ka ọ mụtara nkuzi ya, mana amabeghị ma ọ kwụsịrị n'ezie. O nweela nkwa ọhụrụ nye ezinụlọ ya na ime mkpebi ndị ka mma na-eburu ma ahụike nke ya na ahụike nke nwa ya nwoke n'uche. Ya na ọmarịcha nwanyị ya ogologo oge, Jionni LaValle, ga-alụ n'oge na-abịa.
Ọkpụkpụ nwa: Site na Nwanyị Party ruo Mama Nganga, yana ihe niile na-adịghị mma n'akụkụ ụzọ ga-adị maka ịzụrụ na Dec. 31.
Kedu ihe bụ Electrolytes maka & kedu ka ndị a si enyere gị aka mee ka mmiri dị ọcha?
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara electrolytes yana otu ihe ndị a si abara ahụ gị uru